အင်္ဂလန်နိုင်ငံအခြေစိုက် နာမည်ကြီး JEM Model Agency မှာ မော်ဒယ်လ်အဖြစ် စတင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရတော့မယ့် Miss Universe အလှမယ် သူဇာဝင့်လွင် – BaHuTuTa
အင်္ဂလန်နိုင်ငံအခြေစိုက် နာမည်ကြီး JEM Model Agency မှာ မော်ဒယ်လ်အဖြစ် စတင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရတော့မယ့် Miss Universe အလှမယ် သူဇာဝင့်လွင်
May 21, 2021 admin Beauty, Cele, Fashion 0
အင်္ဂလန်နိုင်ငံအခြေစိုက် JEM Model Agency မှာ မော်ဒယ်လ်အဖြစ် စတင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရတော့မယ့် Miss Universe အလှမယ် သူဇာဝင့်လွင်
နိုင်ငံတကာရှေ့မှာ Miss Universe in best national costume ဆုကို ထိုက်တန်စွာ ဆွတ်ခူးခဲ့တာအပြင် top 21 ထိ ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာမယ် ဇာဝင့်လွင်ဟာလတ်တလောအခြေအနေတွေကြောင့်အမိနိုင်ငံကိုပြန်လာဖို့အဆင်မပြေသေးတာကြောင့် အမေရိကမှာရှိတဲ့ အသိမိတ်ဆွေတွေဟာသူမရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက်အကူအညီတွေအများကြီးပေးခဲ့ကြပါတယ်။
Asia’s Next Top ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့သက်သက်သင်း (Beauty) ဟာလည်း သူမကိုယ်တိုင်က International Model လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ လျှောက်လှမ်းနေခဲ့သူ ဖြစ်တဲ့အလျောက် Candy ကိုလည်းသူမနဲ့အတူလုပ်ကိုင်ဖို့ လက်တွဲခေါ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာလည်းအင်္ဂလန်နိုင်ငံအခြေစိုက် JEM Model Agency မှာ သူဇာဝင့်လွင်တစ်ယောက်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်တော့မယ့် အကြောင်းကို Agency က Jake Egginton ဆိုသူကအသိပေးပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံအတွက်တစ်ကမ္ဘာလုံးကစောင့်ကြည့်နေတဲ့စင်မြင့်ထက်မှာ Speak Out လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ သူဇာဝင့်လွင် ဟာလတ်တေလာမှာတော့အမေရိကနိုင်ငံမှာရှိနေပြီး International Model တစ်ယော က်ဖြစ်ဖို့ ခြေလှမ်းစတင်နေခဲ့ပါပြီ။
သူမနဲ့စတင်ချိတ် ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ JEM Model Agency ဟာ နာမည်ကျော်မော် ဒယ်တွေကိုမွေးထု တ်ပေးခဲ့တဲ့ Agency တစ်ခုဖြစ်ပြီး သက်သက်သင်း (Beauty) ဟာလည်း JEM ရဲ့ Model တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ စီနီယာတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ Candy ကို လက်တွဲခေါ်ပြီး လမ်းကြောင်းမှန်ပေ ါ်ဆွဲတင်ေ ပးခဲ့လို့ Candy ရဲ့အမဖြစ်သူမေနဲ့ပရိသတ်တွေက Beauty ကို ကျေးဇူးတင်စကားေ တွပြောခဲ့ ကြပါတယ်။
Candy ဟာမကြာခင်မှာ JEM ရဲ့ Model တစ်ယောက်ဖြစ်လာတော့မယ့်အကြောင်းကို ” Excited to introduce Thuzar – Miss Universe Myanmar to the JEM Family! We Are JEM Incredible to watch her represent her country with the current political issues on an international level! ” ဆိုပြီး Jake Egginton က သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာ ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။
Candy ရဲ့ ပရိသတ်ေ တွကတော့ ဒီသတင်းကော င်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရမ်းကိုပျော်နေခဲ့ပါတယ်။ Miss Universe Myanmar လေးရဲ့ ပထမဆုံးစ တင်လိုက်တဲ့ International ခြေလှမ်းအ သစ်ကနေ ကမ္ဘာကျော်ပြီး အောင်မြင်တဲ့ Model တစ်ယောက် အထိတက် လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Photos Thuzar Wint Lwin’s FB Acc
Drama ရဲ့ အမြင့်ဆုံး Rating 7.8 ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရရှိခဲ့တဲ့ ‘Law School’ ဇာတ်လမ်းတွဲ အပိုင်း(10)